Amboniloha : Vehivavy 19 taona, naolana, avy eo novonoina – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2019 → janvier → 4 → Amboniloha : Vehivavy 19 taona, naolana, avy eo novonoina
Rehefa avy nampiharan’izy ireo ny filan-dratsiny ity, dia nosisihana hazo ny fivaviany ary novonoina. Nitarika ny fahafatesany izany, ora maromaro taty aoriana.
Habibiana tsy roa aman-tany tokoa no nihatra tamin’ity vehivavy iray, 19 taona, manan-janaka kely iray, teny Alarobia Amboniloha, ny alin’ny faran’ny taona hifoha taom-baovao teo. Raha nifety tamin’ny fitsenana ny taona vaovao tokoa ny rehetra, izy kosa niaritra fangirifiriana lalina nataon’ireo tsy valahara taminy. Araka ny angom-baovao azo teny an-toerana mantsy, dia izy efa niboridana sy nihoson-drà tanteraka no hitan’ny fianakaviany, ny mangiran-dratsin’ny talata lasa teo.
Adiady. Tsy fantatra mazava izay zava-nitranga tamin’io fotoana io. Araka ny feo niely, dia toa hoe niatomboka tamin’ny ady an-dalambe izany. Adin’ireo samy tanora efa varimbarin’ny zava-pisotro misy alikaola. Nilamina ihany anefa no niafarany ary nentin’ireo fianakaviny nody izy. Fotoana vitsy taorian’izay nandeha nivoaka indray ary tany no tsy niverina intsony fa dia ny maraina no hitan’ny havany efa nitsirara teo akaikin’ny totohabato tsy lavitra ny trano fonenany. Tsy niakanjo intsony na dia takon-kenatra iray aza ity vehivavy ity. Nahitana ratra teo amin’ny lohany, tamin’ny lamosiny ary nivoaka rà ny fivaviany. Mbola nisy aina kely izy tamin’io fotoana io ary nezahan’ireo nahita nentina novonjena haingana tany amin’ny hôpitaly. Raha ny voalaza, dia niharan’ny fanolanana faobe izy. Tsy vitan’izay anefa, fa mbola nakarapok’ireo namono tamin’ny vato ary notaritarihany tamin’ny tany, antony nahavaky ny lohany sy ny nandratra ny lamosiny. Fa ny tena habibiana dia mbola noleran’ireo tsy valahara hazo ny fivaviany ; izay heverina fa nahapotika ny tranon-janany sy ny taovao teo ambanin’ny kibony.
Roa voasambotra. Mbola nahateny izy teny amin’ny toeram-pitsaboana raha ny fitantaran’ny olona hatrany ary nitaraina fatratra fa manaintaina azy fatratra iny ambany kibony rehetra iny. Voalaza ihany koa fa fantany tsara ireo olon-dratsy namono azy ary mbola nahavita ny niteny ny anaran’izy ireo talohan’ny nahafatesany, ora maromaro taorian’ny nitsaboana azy. Efa eny am-pelan-tanan’ny pôlisy misahana ny heloka bevava moa ity raharaha vono olona teny Amboniloha ity, amin’izao fotoana izao. Olona roa no fantatra fa efa nosamborina teny an-toerana, ny alarobia teo. Eo am-panaovana fanadihadiana azy ireo kosa ny mpitandro filaminana amin’izao.
Liliane Averty 4 janvier 2019 at 11 h 29 min · Edit
Tsy heloka ho faty no mety fa gadra mandrampahafaty .Raha vonoina ho faty dia tsy mahatsiaro mangirifiry intsony .Amin’izay mitsakotsako tsara mandrampahafaty…tsy mahazo fahafahana intsony . Azo atao ny manidy ireo nahavanindoza amin’ny toerana tery mitoka ,miaraka amin’ny fiambenana Faran’ny izay henjana . isolement sous haute surveillance. Privé de la liberté jusqu’à la mort.
RODRICK 4 janvier 2019 at 10 h 22 min · Edit
Ny olona manao izao karazana habibiana izao, dia tokony helohina ho faty ihany koa.Raha tafamono tsy nahy izy, dia sazy fanagadràna tsotra, fa raha kosa hoe nanindrona zavatra tany @ toerana fady mba hahafaty an’ilay vehivavy ao anaty fangirifiriana, dia hoy aho hoe TOKONY HELOHINA HO FATY ny nanao an’izany satria tsy olona intsony fa biby